एमाले आतिनु र मातिनु हुदैन - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
एमाले आतिनु र मातिनु हुदैन
एमालेका लागि घनश्याम भुसालका ४ टिप्स
आइतवार, बैशाख १०, २०७४
१, क्रान्तिका शक्तिहरु मिलेको ठाउमा क्रान्ति बाचेको छ । क्रान्तिाका शक्तिहरु बिभाजित भएको ठाउमा क्रान्ति मरेको छ । नेपालको क्रान्तिका सन्दर्भमा पनि ठीक त्यहि कुरा लागु हुन्छ ।
क्रान्तिको रक्षाका लागी मुख्य तिनओटा पार्टीहरु मिल्नु पर्दछ या त तीन ओटै पार्टी को शक्ति एउटै पार्टीले हासिल गरेर अगाडी बढ्नु पर्ने हुन्छ ।
२ , नेकपा (एमाले) एक पाटोवाट हेर्दा पार्टी जस्तो र अर्को पाटो वाट हेर्दा राज्य जस्तो देखीन्छ नेपाली कन्तिको रक्षा , राष्ट्रिय स्वभिमानको रक्षा, संविधाको कार्यान्वयन, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सदभाव, विकास र समृद्धि का लागी नेकपा (एमाले) एक कदम अगाडी बढेर हिजोका तिनओटै पार्टी हरुको शक्ति हासिल गरेर राष्ट्र जोगाउनु पर्ने छ ।
३ यो चुनावमा नेकपा (एमाले)ले जित्छ, जित्नु पर्दछ । नेकपा (एमाले) जीत्छ के ? कसरी जित्छ ? कुनै हालतमा जित्न दिनु हुदैन । भन्ने बिन्दु वाट बहसहरु भई रहेका छन । जित्ने धावक रिवन हेरेर दौडन्छ, पछाडी फर्केर अर्काको खुट्टा हेर्दैन । सवै मिलेर (एमाले) लाई एकल्याउने कोशिसहरु भई रहेकाछन (एमाले) आत्तिनु हुदैन । (एमाले)का पछाडी निकै ठुलो जनमत बनिरहेको छ (एमाले) मात्तिनु हुदैन । हामी हाम्रो दर्शन, सिद्धान्त, संगठन र भूअर्थ राजनीतिक अवस्थाको जगमा उभिएर अगाडी बढ्नु पर्दछ ।
४ , कहिले काहि यसको जगमा उभिएर नेता बन्ने पपुलिस्ट बन्न चल्तीका कुरा गर्दै जाने र आफ्रना सवैकुरा छोडेर भिडसंगै कुद्दै जाने खतराहरु विद्यमान छन । पपुलिस्टको सिद्धान्त एक ठाउमा ठक्कर खाने वित्तिकै कहिल्यै नउठ्ने गरि सकिन्छ ।
गत साता एमाले पार्टी कार्यालयमा आयोजित घोषण पत्रमा लेखक तथा बुद्धिजिविसंग भएको छलफलको केही अंश